नेपालगन्जको सन्देश : कोरोना संकट भुसको आगोझैं फैलिँदै छ नेपालमा – Wow Sansar
कुवेतमा हत्या भएको नेपाली महिलाको परिचय खुल्यो
दलित एकता संजाल अन्तरास्ट्रिय सचिब गोपाल सिवाको कोरोनाबाट निधन
दुर्लव रातो नाग देवता को दर्सन गरि आजको राशिफल पढ़नुहोश साथै भेटि स्वरुप लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस धन लाभ हुने छ
आमा बाबु मेकानिक, दुई छोरा गाडी निर्माता !
रवि लामिछाने दम्पतिलाई लाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
वास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं
बिहिबारको यी कार्य गर्नुहोस्, शुभफल मिल्नेछ !
बझाङ्गकी एक युवतीको क’हा,लीला’ग्दो पी’डा : पति , ससुरा र नन्दका श्रीमानले चुरोटका ठुटाले सम्बे,दनशील अं,ङ्ग पो’ल्दै रात भरी क’रणी गर्थे , पानी माग्दा मुखमा पे,साब फेर्थे
भान्जाको बिहेमा गएका मामाको खु’ट्टा का-टिदिए पछि दाङमा यस्तो भयो हेर्नुहोस्
खुशीको खबर,बेरोजगारलाई अब सरकारले नै दिने भयो जागिर। हेर्नुहोस् पुरा जानकारी सहित
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालगन्जको सन्देश : कोरोना संकट भुसको आगोझैं फैलिँदै छ नेपालमा
नेपालगन्जको सन्देश : कोरोना संकट भुसको आगोझैं फैलिँदै छ नेपालमा
काठमाडौं । बाँकेको नेपालगन्जमा आइतबार एकैपटक १५ जनामा कोरोना संक्रमित फेला परेपछि देशभर चिन्ता छाएको छ । सोमबार बिहानसम्म नेपालमा ७५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ ।
नेपालगन्जको मस्जिद र मदरसामा पढाउँदै र बस्दै आएका एकजना ६० वर्षीय वृद्धको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका १५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । ती वृद्धमा गत शुक्रबार मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको थियो । उनीहरु सबै नेपालगन्जको महेन्द्रपार्क क्षेत्र नजिकै एउटै टोलका बासिन्दा हुन् । पहिलो संक्रमित व्यक्तिको परिवार सातजनाको छ ।
एउटा परिवारका सातैजनाको अझै नमूना परीक्षण भइसकेको छैन । आइतबार संक्रमण पुष्टि भएका सबैलाई बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसुलेसनमा राखेर उपचार गरिँदै छ । सबैको अवस्था सामन्य देखिएको भेरी अञ्चल अस्पतालले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
६० वर्षीय वृद्धमा कोरोना देखिएपछि तीन दिनदेखि नेपालगन्जका धम्बोजी, एकलइनी फुलटेक्रा र महेन्द्रपार्क नजिकका केही मस्जिद र मदरसालाई सिल गरी संक्रमतिको पहिचान र खोजी कार्य गर्न थालिएको छ । सात वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकमा समेत संक्रमण देखिएपछि नेपालगन्जको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
नेपालगन्ज महेन्द्रपार्क नजिकै वडा नम्बर ८ मा रहेको एउटा मस्जिदमा नवाज पढ्न जाने र मदरसामा समेत पढाउान जाने आउने गरेका पहिलो संक्रमित बृद्धबाटै टोलका धेरैमा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली अनुसन्धानका लागि नेपालगन्ज आइपुगेको छ ।
शनिबार र आइतबार गरीदुई दिनमा संक्रमतिको सम्पर्कमा रहेका करिब डेढसय जनाको स्वाव परीक्षण गरेको छ । यसैक्रममा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीले संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनेको सूची नै तयार गरेर खोजी गर्दै आएका छन्।
संक्रमितको सम्पर्कमा आउनेहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको फेला परिसक्दासमेत सिल गरिएका जोखिमपूर्ण टोल र क्षेत्रका मानिस ओहोरदोहोर गरिरहेकाले संक्रमण अझै फैलिन सक्ने खतरा बढेको छ ।
मुस्लिम समुदायमा आपसमा घुलमिल धेरै हुन्छ । एउटै परिवारमा धेरै सदस्य हुन्छन् । जसले गर्दा एउटा संक्रमित भएमा धेरैमा फैलिन सक्ने अवस्था रहन्छ । नेपालगन्ज घटनाले अर्को सन्देश दिएको छ । त्यो के भने नेपालमा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको छ । बालबालिका र वृद्धवृद्धा यसको चपेटामा पर्ने देखिएको छ ।
भारतबाट लकडाउनअघि र पछि गरी डेढ लाखभन्दा बढी नेपाल प्रवेश गरेका छन् । त्यहाँ संक्रमित भएकाले नेपालमा धेरैसँग भाइरस फैलाएको हुनसक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । त्यसैले सरकारले जुन ठाउँमा भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ, त्यसलाई सिल नगरे स्थिति भयावह हुनसक्ने चिकित्सकहरूले बताउन थालेका छन् ।
Breaking:देशभर लकडाउन हुन्न, निषेधाज्ञा हुनसक्छ
६७ वर्षीय हरिबहादुर जसले चितुवासँग ‘कुस्ती’ खेलेर जोगाए ज्यान !
गाउँमा पसेर हात्तीले वितण्डा मच्चाउन थालेपछि स्थानीयवासी आतङ्कित